Adin’ny mpivady: maty niharan’ny fitsaram-bahoaka ilay rangahy | NewsMada
Adin’ny mpivady: maty niharan’ny fitsaram-bahoaka ilay rangahy
Ny tendrom-po tsy mba namana! Matin-drangahy, notsindroniny ny antsy ramatoa vadiny. Vokatr’izay, matin’ny fitsaram-bahoaka kosa ilay nahavanon-doza. Tany Betikoky Atsimo tany ity tranga ity.
Noleran-drangahy ny antsy ny vadiny ary maty tsy tra-drano. Tsy namelan’ny fokonolona kosa izy io raha tsy matin’ny fitsaram-bahoaka, tany Andanomangatsiaka, Betioky Atsimo, ny alarobia teo. Araka ny fanazavana azo, nifamaly ireto mpivady ireto, ary henon’ny fokonolona ny fifamaliana. Tsy nisy niditra anefa satria efa matetika ny fifamalian’izy ireo. Voalaza fa nifampikasi-tanana izy mivady. “Niakatra ny feo ary niafara tamin’ny hikiaka izany ary nangina avy eo”, hoy ny naheno ny ady.
Rehefa nozahana, efa ra nandrika ny tao an-trano. Nihosin-dra tanteraka tao amin’izy mivady. Tsy nahatsindry ny hatezerany ilay rangahy ka nolerany ny antsy ramatoa. Maty tsy tra-drano izy io ary nitsoaka avy hatrany ilay vadiny. Nenjehin’ny olona ary nokarohina ilay raim-pianakaviana, ka niharan’ny fitsaram-bahoaka. Tsy namelan’ny fokonolona raha tsy maty izy io. Nandray an-tanana ny raharaha ny mpitandro filaminana. Tsy mbola nisy aloha ny olona nosamborina na teo aza ity vonoan’olona sy resaka fitsaram-bahoaka ity.
Miseho mametika ny adina mpivady
Tsy voalohany nisy fifamonoana mpivady tahaka izao, izay voalaza fa matetika izy io tato ho ato, raha ny fitarainana tonga eny amin’ny mpitandro filaminana. Vao ny herinandro ambony teo ilay vehivavy nanindrona antsy ny vadiny teny Manjaka Ivandry. Mba tsy niharan’ny fitsaram-bahoaka ramatoa fa nosamborin’ny polisy. Teny Anosibe, vao tsy ela, ramatoa iray maty daroky ny vadiny ihany koa.
Trangam-piarahamonina mahazo vahana eto amintsika ny adin’ny mpivady, indrindra eny amin’ireo olona somary sahirankirana. Am-polony isan-kerinandro ny fitarainana tonga eny amin’ny polisy, rehefa avy mandalo any amin’ny fokontany. Toy izany koa any amin’ireo toeram-pitarainana ho an’ny miaro ny zon’ny vehivavy sy ny ankizy. Ny vehivavy koa anefa efa maro ny mamono ny vadiny fa tsy ny lehilahy ihany. Toy iry tany Manjaka Ivandry.